Stockholm ayaa baabuurta ka nasan doonta maalinta sabtida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dubbdäcken gör att farliga partiklar samlas i dammet på Stockholms gator. Foto: TT
Stockholm ayaa baabuurta ka nasan doonta maalinta sabtida
La daabacay onsdag 16 september 2015 kl 16.13
Maalinta sabtida ayaa baabuurta yar yar laga joojin doonaa in ay dhexmaraan waddooyinka halbowlaha u ah farasmagaalaha magaalada Stockholm.
- Ujeeddadu waxa ay tahay in la arko bal sida ay magaalada Stockholm noqonayso marka baabuurta laga joojiyo iyo in bal in la tijaabiyo dadka oo bilaa gawaadhi magaalada iska dhexgooshaya. Inta badan waxyaabo badan ayaynu afka ka sheegnaa, markan se wixii aannu sheegnay baanu rabnaa in aannu ficil u beddelno. Kaasi waxa uu ahaa Anders oo ka tirsan xafiiska gaadiidka magaalada Stockholm.
Waxa maalinta sabtida oo ku began 19 sebtember ka dhici doona magaalada Stockholm olole loogu magacdaray I stan utan min bil, taasi oo micnaheedu yahay magaalada oo uu gaadhigaygu ka maqan yahay.
Olalahan ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka magaalada Stockholm. Ololahan ayaa ah mid baabuurta yar yar hal maalin laga mabnuucayo xuddunta magaalada iyo agagaagka Gamla Stan. Muddo afar iyo labaatan saacadood ah ayaa la ogolaan doonaa uun in basaska magaalada ka dhex shaqeeya, tagaasida, gaadiidka xamuulka qaada iyo baabuurta gargaarka degdega ahi ay badhtamaha magaalada maraan, halka ay baabuurta sida gaarka ah xarraga loogu wataa ka mabnuuc ahaan doonaan goobahaasi. Barnaamijkan oo qayb ka ah dadaalada lagu ilaalinayo deegaanka, lana qabto sannadkii mar, ayaa ka dhici doono magaalooyin badan oo waddamada reer Yurub ah. Waa kan Ander oo ka tirsan xafiiska gaadiidka magaalada Stockholm oo ka warramaya sidii uu barnaamijkani u dhacay sannadkii hore.
- Sannadkii hore waxa ka qaybqaatay 2000 oo magaalo oo adduunka oo dhan ku yaalla, kuwaasi oo u badnaa waddamada Yurub. Waddankan Sweden waxa ka qaybqaatay 87 degmo.
Anders mar la waydiiyay bal in hal maalin oo baabuurta la joojiyaa ku filan tahay ilaalinta deegaanka waxa uu ku jawaabay;
- Haa, waa qabaa in ay caawinayso. Maxaa yeelay waxa mihiim ah in mar walba laga wada hadlo sida uu mustaqbalka magaaladu noqonayo. In mustaqbalka la helo magaalo dhan oo bilaa baabuur ah, waxa ay dad badani aaminsan yihiin in ayna macquul ahayn, balse waa wax dhici kara. Waxa mihiim ah in aynu wax ka beddelo hannaanka gaadiidkeenna, maxaa yeelay waxa sii kordhaysa tirada dadka iyo waliba gaadiidka la isticmaalayo. Kaasi waxa uu ahaa Anders oo ka tirsan xafiiska gaadiidka magaalada Stockholm.
Musa Mahamud, Radio Iswiidhen Soomaali